काठमाडौँ । झण्डै २० वर्षपछि तालिवान विद्रोहीले जीत हासिल गरेपछि अफगानिस्तानमा बन्ने नयाँ सरकार कस्तो होला भन्ने चासो र जिज्ञासा सर्वत्र छाएको छ । नयाँ सरकारका बारेमा अफगानिस्तान, तालिबान र अन्तरराष्ट्रिय मामिलाका जानकारले आआफ्ना अनुमान सार्वजनिक गरिरहेका छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांशले अफगानिस्तानमा फेरि पनि कट्टरपन्थी, रुढीवादी, अनुदारवादी र अलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था लागू हुने अनुमान गरेका […] The post कस्तो होला तालिवानको नयाँ सरकार ? appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
अफगानिस्तानमा तालिवान सरकार बनेपछि नौ लाखले गुमाए जागिर
तालिवान सरकारको नीति र कार्यशैलीप्रति आन्तरिक तथा वाह्य क्षेत्रबाट असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको हो भने हिंसात्मक घटना पनि फेरि सुरु हुन थालेका छन्।...
तालिवानलाई पाकिस्तानको अनौपचारिक मान्यता, तालिवान प्रतिनिधिले सम्हाले दूतावास
तालिवानले काबुल नियन्त्रणमा लिएको तीन महिना बित्न लागेको छ। सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि तालिवान नेतृत्वको सरकारलाई विश्वका कुनै पनि देशले मान्यता दिएका छैनन्। यद्यपि तालिवान प्रतिनिधिहरुसँग निरन्तर रुपमा विभिन्न देशका नेताहरुले भेट गरेका छन्। विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरु काबुल पुगेका छन्। अफगानिस्तानको छिमेकी पाकिस्तानले औपचारिक रुपमा अफगानिस्तानको नेतृत्वको रुपमा…
तालिवान सरकारलाई चीनको समर्थन, ३ करोड १० लाख अमेरिकी डलर दिने घोषणा
एजेन्सी- चीनले अफगानिस्तानमा बनेको नयाँ तालिवान सरकारलाई समर्थन जनाएको छ । विश्वका धेरै देशले तालिवान सरकारलाई समर्थन गर्न आनाकानी गरिरहेका बेला चीनले समर्थन गर्ने घोषणा गरेको हो । चीनले तालिवान सरकारलाई समर्थन गर्दै तीन करोड १० लाख अमेरिकी डलर सहयोगसमेत गर्ने जनाएको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयले अफगानिस्तानको नयाँ सरकार इस्लामिक इमरेट्स अफ तालिवानलाई प्रारम्भीक […]
चीनले अफगानिस्तानमा बनेको नयाँ तालिवान सरकारलाई समर्थन जनाएको छ । विश्वका धेरै देशले तालिवान सरकारलाई समर्थन गर्न आनाकानी गरिरहेका बेला चीनले समर्थन गर्ने घोषणा गरेको हो । चीनले तालिवान सरकारलाई समर्थन गर्दै तीन करोड १० लाख अमेरिकी डलर सहयोगसमेत गर्ने जनाएको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयले अफगानिस्तानको नयाँ सरकार इस्लामिक इमिरेट्स अफ तालिवानलाई प्रारम्भिक सहयोग स्वरुप तीन करोड १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ । अफगानिस्तानमा तालिवान विद्रोहीले सत्ता क
अफगानिस्तानमा तालिवान सरकार बनेपछि पाँच पत्रकार गिरफ्तार
अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार बनेपछि पाँच पत्रकार गिरफ्तार भएका छन् । कामचलाउ नयाँ सरकार बनेको भोलिपल्ट नै बुधबार काबुलस्थित एक पत्रिकाका पाँच पत्रकारहरू गिरफ्तार भएको जनाइएको छ । इटिलाट्रोज नामक पत्रिकाका प्रधान सम्पादक जाकी डार्याबीले आफ्ना पाँच सहकर्मी पत्रकार गिरफ्तार भएको पुष्टि गरेका छन् ।उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, “इटिलाट्रोज दैनिक पत्रिकामा कार्यरत मेरा पाँच सहकर्मी पत्रकारलाई तालिबान समूहका व्यक्तिहरुले काबुलबाटै पक्राउ गरेर लगेका छन् ।” तालिबान समूहले
अफगानिस्तानमा तालिवान सरकार घोषणा
तालिवानले अफगानिस्तानमा सरकार घोषणा गरेको छ। अफगानिस्तान नियन्त्रणमा लिएको तीन सातापछि तालिवानले सरकार घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको छ । मुल्लाह मोहम्मद हसन अफगानिस्तानका नयाँ प्रधानमन्त्री हुने छन् । उपप्रधानमन्त्री अब्दुल गनी...
नयाँ सरकार घोषणाको तयारीमा तालिवान
अफगानिस्तान कब्जा गरेका तालिबान विद्रोहीले अब छिट्टै सरकार निर्माण गर्ने जनाएका छन्। सरकार गठनका सम्बन्धमा भएका विभिन्न चरणको वार्ता बुधबार सकिएको तालिवानले बताएका छन्। उनीहरुले सरकार बनाउने सम्बन्धमा नै राजनीतिक...
तालिवान समूहले यहाँको शासन सत्ता हातमा लिएपछि नयाँ सरकार गठनका बारेमा छलफल गरिरहेका बताइएको छ। तालिवानका संस्थापकमध्येका एक नेता मुल्लाह अब्दुल गनी बरादर नयाँ सरकार गठनको छलफलका लागि गत शनिबार...
वार्ताद्धारा समाधान खोज्न तालिवान र अफगान सरकारलाई क्रिस्चियन धर्मगुरु पोपको आग्रह
‘शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको प्रतिक्षामा तालिवान’
काठमाडौँ– अगानिस्तामा कब्जा जमाउँदै गएको तालिवानले आफूहरुले सबै अफगानीको समावेशी सरकार चाहेको जनाएको छ । द गार्जियनले लेखेअनुसार बीबीसीसँग कुरा गर्दै तालिवान प्रवक्ता सुहाइल शाहीनले आफूहरुले शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरणको प्रतिक्षामा रहेको बताएका छन् । उनले तालिवानले इस्लामिक सरकार चाहेको पनि बताएका छन् । शाहीनले तालिवानले महिलाहरूको सम्मान गर्ने बताए । उनका अनुसार महिलाहरूलाई शिक्षा […]
Khabarhub आषाढ २०७८